WONDERFUL UNIVERSE: March 2009
အလွမ်းချိုတခုတ်တရနဲ့ ရေးခြစ်ခဲ့တာပါဘယ်တော့မှ ပီပီပြင်ပြင်မဖော်နိုင်ခဲ့တဲ့ မင်းရဲ့ပုံရိပ်တွေသာငါ့မှာ ပြန့်ကျဲလို့။လရောင်က မိန်းမူးစရာကောင်းလောက်အောင်အေးမြလှပတယ်။သူ့အဖော် အကာလ ညတွေကတော့ဖောက်လွှဲဖောက်ပြန် စိတ်တွေကိုလဲ အားပေးတတ်သေးရဲ့။အဝေးက အုန်းမောင်းခေါက်သံဟာငါ့ရင် တခွင်လုံးကို လှုပ်နိုးနေတယ်ညီမျှခြင်းမဲ့၊ ကိန်းဂဏန်းမဲ့အချစ်အတွက် သက်သက် ခေါင်းလောင်းလေးကတံခါးဝမှာ ကြိုးဆွဲသူကို မျှော်လို့။သေချာတယ်အလွမ်းတွေရှိခဲ့ရင်တောင်မခါးသက်တော့ဘူး။မေတ္တာဖြင့် - မိုးကုတ်သား
အခုတလော ကျွန်တော် အိပ်မက်တွေ မက်ပြီး အစောကြီး နိုးနိုးနေတတ်သည်။ များသောအားဖြင့် အိပ်မက်တွေက ဖေဖေ၊ မေမေ၊ ညီ၊ ညီမလေးတွေနဲ့ မြို့ကလေး၊ အဲ့တာတွေ ဆီကိုပဲပေါ့။ မထူးဆန်းလှဘူး ဆိုသော်လည်း ကျွန်တော် အိမ်ကို လွမ်းနေပါသည်။ ခု နောက်ပိုင်းမှာတော့ သူတို့တွေရဲ့ အိပ်မက်က ဘာ တွေလဲ။ ကျွန်တော် သိချင်နေသည်။ ဖေဖေ၊ မေမေတို့ရဲ့ အိပ်မက်တွေက ဘာလဲ။ ညီ၊ ညီမလေးတွေရဲ့ အိပ်မက်တွေကဘာလဲ။ သူတို့အိပ်မက်တွေအတိုင်း ဘာတွေကို အကောင်အထည် ဖော်နိုင်ခဲ့ပြီး ဘာတွေကတော့ ဘယ်တော့မှ ဖြစ်မလာနိုင်တော့မဲ့ အိပ်မက်တွေလဲ။ ကျွန်တော့်အိပ်မက်ကတော့ ခုလောလောဆယ်မှာ ရှင်းရှင်းလေး။ အချိန်တန်လျှင် အိမ်ပြန်ပီး မိသားစုတွေ သိုက်သိုက်ဝန်းဝန်း ပြန်နေကြဖို့၊ ဖေဖေနဲ့ မေမေကို ပြုစုဖို့။ နောက်ပြီး သူတို့တတွေရဲ့ အိပ်မက်တွေကို ကျွန်တော် တတ်နိုင်သမျှ ကူညီ အကောင် အထည်ဖော်ပေးဖို့။ကျွန်တော် အိပ်မက်များစွာ မက်ခဲ့ဖူးပါသည်။ ဖြစ်လာခဲ့သည့် အိပ်မက်တွေလဲ ရှိသည်။ ဖြစ်မလာခဲ့သည့် အိပ်မက်တွေလဲ ရှိသည်။ နောက်ပြီး မေ့လျော့သွားသော အိပ်မက်တွေလဲ ရှိခဲ့သည်။ လက်တွေ့ဘ၀အတွက် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော အိပ်မက်တွေလဲ ရှိသလို ဖြစ်ချင်စိတ်သက်သက်နှင့် စိတ်ကူးယဉ် ဆန္ဒအိပ်မက် သက်သက် တွေလဲ ရှိသည်။ ကျွန်တော့် အိပ်မက်တွေကို ခဏ လွှတ်ချထားရင်း ဖေဖေ၊ မေမေနဲ့ ညီလေး၊ ညီမလေးတွေရဲ့ အိပ်မက်တွေကို ကျွန်တော် လိုက်လံ ဖမ်းဆုပ်နေမိသည်။ အဲတာတွေနှင့် ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော့်ဆီ စာရေးဖို့ မှာထားသည်။ ၀မ်းကွဲညီမလေး သယ်လာသော အိမ်ကစာ တစ်ထပ်ကြီးကို ၀မ်းသာအားရ ဖတ်ရင်း ကျွန်တော် အိမ်အလွမ်းတချို့ သက်သာရာ ရသွား၏။ နောက်တော့ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်ပျော်သွားခဲ့သည်။ အိပ်မက်တွေ မမက် တော့သော်လည်း ထုံးစံအတိုင်း နံနက်စောစော နိုးလာတော့ ပျောက်ဆုံးနေသော ကျွန်တော့်ကိုယ် ကျွန်တော် ပြန်တွေ့ ရသလို ခံစားရသည်။ကျွန်တော်တို့ ဘ၀တွေမှာ ဖြစ်လာခဲ့သော အိပ်မက်တွေ ရှိသလို ဖြစ်မလာခဲ့သော အိပ်မက်သေတွေလဲ ရှိသည်။ တစ်ချို့ အိပ်မက်တွေက အိပ်မက်သက်သက်မျှသာ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော်တို့ အိပ်မက်တွေ မမက်လို့ မဖြစ်။ အိပ်မက်တွေ ဆက်မက်နေဖို့ လိုအပ်သည်။ ဒါတွေကို ဖေဖေနဲ့ မေမေ၊ ညီ၊ ညီမလေးတွေ သိအောင် ကျွန်တော် ပြောပြချင်ပါသေးသည်။ အဲဒါတွေကို ပြောပြနိုင်ဖို့အတွက် သူတို့ အိပ်မက်တွေကို ကျွန်တော် အရင် သိအောင်လုပ်ရပါအုံးမည်။ရေးသားသူ - ဖိုးတာ
လူ ဘယ်ကဖြစ်ခလေးမလေး တစ်ယောက်က သူမရဲ့ အမေကို မေးတယ်။'မေမေ၊ မေမေ။ လူမျိုးနွယ်စုတွေ ဘယ်လိုက စဖြစ်လာကြတာလဲဟင'်'ထာဝရ ဘုရားသခင်က အာဒမ်နဲ့ ဧ၀ကို ဖန်ဆင်းခဲ့တယ်။ သူတို့ ခလေးတွေ မွေးကြတော့ ခုလို လူသားမျိုးနွယ်တွေ ဖြစ်လာကြတာပေါ့ကွယ'် လို့ အမေဖြစ်သူက ပြန်ဖြေတယ်။နောက် နှစ်ရက်လောက်နေတော့ အဲဒီ မေးခွန်းကိုပဲ ခလေးမလေးက အဖေဖြစ်သူကို ပြန်မေးပြန်တယ်။'ဟိုး လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတုန်းက ရှိတဲ့ မျောက်မျိုးနွယ်က နေ အဆင့်ဆင့် ပြောင်းလဲလာပြီး ဖေဖေတို့ လူသားမျိုးနွယ်တွေ ဖြစ်လာကြတာပေါ့ သမီးရ'အဖေလုပ်သူဆီက အဲဒီ အဖြေစကား ကြားရတော့ ခလေးမလေးလဲ စိတ်တော်တော် ရှုပ်ပီး ဝေခွဲမရ ဖြစ်သွားတယ်။ ဒါနဲ့ သူမရဲ့ အမေကို သွားပြီး မေးပြန်တယ်။'မေမေ၊ အဲဒါဘယ်လို ဖြစ်နိုင်မလဲ။ မေမေပြောတော့ လူမျိုးနွယ်ဆိုတာ ထာဝရဘုရားသခင်က ဖန်ဆင်းခဲ့တာဆို။ ဖေဖေ ပြောတော့ လူဆိုတာ မျောက်မျိုးနွယ်ကနေ ဖြစ်လာတာတ'ဲ့အဲဒိတော့ အမေလုပ်သူက ပြန်ဖြေပါတယ်။'အော်၊ သမီးလေးရယ်။ မေမေက မေမေ့ဘက်က အမျိုး အကြောင်း ပြောသလို သမီးဖေဖေကလဲ သူ့ဘက်က အမျိုးအကြောင်း သူ ပြောတာပေါ့ကွဲ့'အီးမေးလ်က တဆင့် ရတဲ့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ဟာသလေးတွေပါ။ဘာသာပြန်သူးမိုးကုတ်သား
ဒီသီချင်းလေးကို ခုတလော ခဏခဏ နားထောင်ဖြစ်နေတယ်။ မိတ်ဆွေတို့လဲ နှစ်သက်ကြမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ Cry on my shoulder Hm... Oh... If the hero never comes to you If you need someone you're feeling blue If you wait for love when you're alone If you call your friends the light is hold You can run away but you can't hide Through the storm and through the lonely night Then i show you there'sadestiny The best things in life they are free But if you wanna cry, cry on my shoulder If you need someone who cares for you If you feeling sad your heart gets colder Yes, I show you what will love can do If your sky is Grey, oh let me know There'saplace in heaven where we'll go If heaven isamillion years away Oh, just call me and I make your day When the night are getting cold and blue When the days are getting hard for you I will always stay here by your side I promise you I'll never hide But if you wanna cry, cry on my shoulder If you need someone who cares for you If you feeling sad your heart gets colder Yes, I show you what will love can do သီချင်းစာသားနဲ့ ပုံကို ဒီနေရာက ကူးယူ ထားတာပါခင်ဗျာ။မျှဝေခံစားသူ - မိုးကုတ်သား
What happens whenafly falls intoacoffee cup? ကော်ဖီခွက်ထဲ ယင်တစ်ကောင် ကျသွားတဲ့အခါအီတာလျံ : ကော်ဖီခွက်ကိုလွှင့်ပစ်လိုက်ပြီး နာလိုခံခက်တဲ့ စိတ်တွေနဲ့ အဝေးကို ထွက်သွားခဲ့တယ်။ပြင်သစ်: ယင်ကောင်ကို ဖယ်ထုတ်လိုက်ပြီး ကော်ဖီကို သောက်လိုက်တယ်။တရုတ်: ယင်ကောင်ကို စားလိုက်ပြီး ကော်ဖီကို သွန်ပစ်လိုက်တယ်။ရုရှား: ကော်ဖီကို ယင်ကောင်နဲ့ တွဲသောက် ပစ်လိုက်တယ်။ ငွေပိုမပေးရပဲ အလကားရတဲ့ အပိုဆုလို့ သူက သတ်မှတ်ထားတယ်လေ။အစ္စရေး : ကော်ဖီကို ပြင်သစ်ကို ရောင်းတယ်။ ယင်ကောင်ကို ကျတော့ တရုတ်ကို ရောင်းလိုက်တယ်။ ရတဲ့ငွေနဲ့ ကော်ဖီ အသစ်တစ်ခွက် ပြန် ၀ယ်သောက်တယ်။ ပိုတဲ့ ငွေကိုတော့ ကော်ဖီထဲ ယင်ကောင် မကျအောင် ကာကွယ်တဲ့ စက်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်ဖို့ ရင်းနှီး မြှုပ်နှံလိုက်တယ်။ပါလက်စတိုင်း : ကော်ဖီခွက်ထဲ ယင်ကောင် ကျတဲ့အတွက် အစ္စရေးကို အပြစ်တင်တယ်။ အကြမ်းဖက်မှုတွေ အတွက် UN ကိုဆန္ဒ ပြတယ်။ EU ကနေ ငွေချေးပြီး ကော်ဖီ အသစ်တစ်ခွက် ၀ယ်တယ်။ ငွေတွေကို ဖောက်ခွဲရေး လက်နက်တွေ ၀ယ်ပြီး ကော်ဖီဆိုင်ကို ဖောက်ခွဲ ပစ်လိုက်တယ်။ အီတာလျံ၊ ပြင်သစ်၊ တရုတ် နဲ့ ရုရှား တို့က သူတို့ရဲ့ ကော်ဖီခွက်ကို ပါလက်စတိုင်းကို ပေးပစ်ခဲ့သင့်တယ်လို့ အစ္စရေးကို ၀ိုင်းပြောနေကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရော... ကိုယ့်ကော်ဖီခွက်ထဲ ယင်ကောင် ကျသွားခဲ့ရင် ဘာလုပ်ကြမှာပါလိမ့်။ဖတ်မိတဲ့ စာတိုလေးတစ်ပုဒ်ကို ဘာသာပြန်ကြည့်တာပါ။မိုးကုတ်သား